Amaholide futhi ukudla nsuku zonke turkey kuhhavini.
Izidlo kusuka turkey kuhhavini ngokuyinhloko iholide. Ngokwesiko turkey wabhaka e-United States ngo- Thanksgiving Day, siwulimi iwuphawu ukuceba nokuchuma. Izinketho ukupheka turkey is pretty okuningi uye ezindleleni zayo futhi izithako ezahlukene ezisetshenziswa ezweni ngalinye.
E-Brazil, turkey iphekwe nge izaqathi. Ngenxa yale njongo, inyoni encane abasha enesisindo kungekho kg ezingaphezu kwezintathu. isidumbu Eviscerated kahle wageza wesula ithawula. Ngaphakathi ngosawoti nigcwalise ukugcwaliswa, ngemva kwalokho esiswini u sutured ngentambo ngaphambi baking. Akukona ukuhlakanipha ukufihla wenza kusukela izaqathe, u-anyanisi, isibindi, turkey kanye namakhambi oqoshiwe. Ukuze wenze lokhu kukho izitsha turkey kuhhavini kufanele ahlanze futhi grate 4 izaqathe amaphakathi, ikhasi nquma 2 anyanisi ezincane kanye clove ambalwa garlic. Fry epanini amaqatha ambalwa ubhekeni futhi uthele amafutha encibilikisiwe. Engeza ubhekeni oqoshiwe isibindi, turkey, onion isanqante bese Fry konke imizuzu 5. Okuholela nengulube ngokusebenzisa Phendula inyama grinder ngokungeza nalokho amakhambi, garlic, breadcrumbs, usawoti kanye pepper. Gcwalisa isidumbu ukugcwaliswa Sew esiswini, agqoke ugqoko bafakwa kuhovini eliwu degrees 200 2 ihora. Phakathi ukupheka turkey ukuchelela juice kwakhiwa. Ngemuva ukupheka, asuse isikhumba, uthele isidlo esiphelele ne kalamula ukukhonza.
ENgilandi, izitsha kusukela turkey kuhhavini ngokwesiko enawulungiselelwa Christmas. Igqamuka inyama yenkomo ebulewe yilesi ageze futhi asule ithawula kahle ngaphakathi nangaphandle ngosawoti kanye pepper. Lungiselela ukugcwaliswa. Ukuze wenze lokhu kushunqe uthuli 100 g ubhekeni ngibhema ke Fry therein yenkukhu isibindi, uthathe izingcezu ezincane bese omunye isibani kuze brown golden. 100 g isinkwa esimhlophe ku cubes futhi omile kuhhavini noma microwave. Amabili omuncu apula ikhasi core, uthathe cubes ufafaze kalamula. Khona-ke uhlanganise anyanisi ethosiwe kanye isibindi crunches ngomumo. Engeza isigamu inkomishi alimondi oqoshiwe, isigamu inkomishi omisiwe pitted, apula asikiwe, elikhuhluziwe yashizi umpe eyodwa lemon, amaqanda amabili okuluhlaza, ingxenye yesithathu yezinhlobo ingilazi yobisi, isigamu isipuni cumin bese esikweyoku omisiwe. Ngomusa uhlanganise, ukugcwalisa isidumbu, thunga ngentambo esiswini, Ukukhemezela ne kalamula amafutha ne ezintathu wezipuni bhotela. Goqa in ucwecwe kanye nezinkukhu wabhaka 2 amahora ezingeni lokushisa 180-200 degrees. Khona-ke phaka ucwecwe (phezulu) bese ume turkey kuhhavini imizuzu 40-50 ukuze uthole brown yegolide. Khona-ke, susa turkey, ukususa string uphake.
Izidlo kusuka turkey kuhhavini nsuku zonke.
Ukuze ukudla samaholide turkey kuhhavini, udinga isikhathi esiningi. Kulabo abafuna ukubuyisa le nyoni hhayi kuphela ngamaholide, zikhona ongakhetha eziningana ukuze ukulungiselela ngokushesha inyama wezokudla.
Turkey cutlets kuhhavini uzilungiselele kunalokho ngokushesha. Le ndlela yokupheka kufanelekile labo abagwema ukudla okuthosiwe kanye nalabo ungafuni ukudla kilojoule extra, ngoba inyama phakathi ukuthosa kuso ubamba ethile uwoyela.
Ukuze silungiselele meatballs turkey uzodinga 500 amagremu izinkukhu ethangeni nezibopho (lena ingxenye namanzi iningi turkey futhi ekahle meatballs), u-anyanisi amabili amaphakathi, ambalwa clove sikagalikhi, amaqanda 2 no-2 tincetu tesinkhwa. Jikela izinkukhu inyama ngokusebenzisa grinder inyama, engeza isinkwa ngaphambilini ofakwe ngobisi, u-anyanisi oqoshiwe nesweli, inkathi ngosawoti kanye pepper bese uxove nengulube kahle. Ngemva kwalokho, yakha chops isandla. Ukuze yokungalungiseleli hhayi unamathele ezandleni zakho, ezimanzisa ngamanzi. Beka patties bhaka noma pan, ngaphambilini ngamafutha. Bhaka amakhekhe kuhhavini at 180 degrees imizuzu engu-20 ukuze turkey patties kuhhavini waphenduka juicier pan ungakwazi ukwengeza umbhangqwana wezipuni umhluzi.
Chops kusuka turkey kuhhavini, ngokungafani ukulungiswa ezinye izinhlobo inyama ayidingi ukuthi ibe-pre-ukuthosa epanini. Ukuze ukulungiselela yabo Slice turkey webele yizabelo, sula kubo dudula. Hlikihla ngosawoti, emnyama, paprika futhi turmeric, noma ufafaze inhlanganisela izinongo isilungele izinyoni. Coat ebusweni ucezu ngalunye 10% amafutha ukhilimu omuncu, wafaka kuso, ngaphambili ezinamafutha akahle ubhake at 180 degrees imizuzu 25-30. Bon appétit!
Izithelo kuvuna ebusika. Kanjani ukugcina apula omisiwe?
GOP-stop - kungcono ngokuphanga emgwaqweni kanti GOP - isimo ehostela sabasebenzi
Submachine isibhamu "Chestnut" AEK-919k: incazelo, izici kanye nokubuyekeza